IIMAANA Archives - Page 5 of 14 - Ibsaa Jireenyaa
Nabiyyi keenya Muhammad sallallahu aleyh wassallam ilaalchisee
Haqa Nabiyyii sallallahu aleyh wassallam irraa hanga inni ajajuutti, dhoowwutti fi hayyamutti ajajaan, dhoowwan, hayyamaani fi hojiin isa dursuu (darbuu) dhiisudha. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa jedhe:
Nabiyyii Ilaalchise Dirqama Nurra jiru-1
May 1, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaalee darbe keessatti gosoota tawhiida sadan keessatti dubbii iimaana ilaalle turre. Har’a immoo itti fufuun Nabiyyoota keessatti dubbii iimaana diigu ni ilaalla.
Hiika Wali-Galaa Amanti Islaamaa
April 28, 2020 Sammubani Leave a comment
Duuti maalii? Jireenya tanaan ala jireenyi biraa jiraachutti akkamitti amannaa? Dhuguma, duuti dhuma namaa ta’uu dandeessi? Haalli sirriin Rabbii olta’aatti amanan maaliidhaa? Gaafilee kanaa fi kan kana fakkaataniif deebii kitaaba kana keessatti ni argattu.
Dubbii iimaana Diigu-Kutaa 6.7
April 26, 2020 Sammubani One comment
Kutaa darbe keessatti Rabbiin ala wanta nama fayyadu fi miidhu hin dandeenye waammachuun (du’aayin itti qajeelun) shirkii akka ta’e ilaalle jirra. Har’a kutaa xumura dubbii beektotaatin ni goloobna.
April 24, 2020 Sammubani Leave a comment
Akkaataa Rabbiin ala wanta nama hin fayyannee fi miidhaa hin deebisne kadhachuun shirkii fi wanta iimaana diigu itti ta’u–Kutaa 3
April 21, 2020 Sammubani Leave a comment
(Bifoota ibaadaa gurguddoo keessaa inni tokko du’aayidha. Akka lugaatti du’aayin waamu ykn kadhachuudha. Shari’aan nama lubbuu qabu sagalee kee dhagayu, akka beekumsaan ykn humnaan si gargaaru waamu irraa hin dhoowwu. Kuni du’aayi asitti dubbannu miti. Kana irra, du’aayin asitti barbaanne fi dhuka ibaadaa ta’e, “sababa qabatamaa ifatti mul’atuun alatti faaydaa argachuu fi miidhaa ittisuuf kadhachuudha.” Du’aayin kuni jiddu-gala tokko malee qajeelloon Rabbiin qofarraa barbaadamu qaba.
April 19, 2020 Sammubani One comment
Kutaa darbe keessatti hiikaa fi barbaachisummaa tawhiidu Al-Uluuhiyyah ilaalle turre. Tawhiida Al-Uluuhiyyah jechuun ibaadadhaan Rabbiin tokkichoomsudha. Kana jechuun ibaadaa hunda Rabbi qofaaf gochuudha. Har’as itti fufuun barbaachisummaa tawhiida kanaatii fi hiika shirkii ni ilaalla.